सम्पादकीय : विप्लवपछि प्रेसलाई प्रतिबन्ध ! - Samajbad
सम्पादकीय : विप्लवपछि प्रेसलाई प्रतिबन्ध !
in विशेष, समाज, सम्पादकीय
काठमाडौं : नेपालको संविधानमा प्रेसलाई चौथो अंग भनेर ब्याख्या गरिएको छ । प्रेसले जनतालाई लागेका विचारहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले आदन प्रदान गर्ने महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले (व्यवस्थापिका, कार्यपालिक र न्यायपालिका) पछि राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ । त्यस्तै संविधानले पनि स्वतन्त्र प्रेस तथा यसका विश्वब्यापी मुल्य, मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । तर अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले भने पत्रकारलाई सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषणमा बन्देज लगाउने उदेश्यकासाथ मिडिया काउन्सिलको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । ससद्मा यो विधेयकको प्रस्तुतिपछि पत्रकार र सरोकारवाला आन्दोलित हुन पुगेका छन् र यसको बाछिटा सर्वत्र छरिएका छन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्धको प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको ओली सरकारले पत्रकारितामाथि घुमाउरो तरिकाले प्रतिबनध लगाउन खोजेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता भएलगत्तै यसबारे विरोधका स्वर तीव्र भएका हुन् जो अत्यन्त स्वाभाविक छ। मिडिया काउन्सिलका नाममा विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई भंग गर्ने र यो संरचनालाई सोझै सरकारअन्तर्गत ल्याई पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनको कार्य पनि सरकार स्वयंले गर्ने ध्येय यो विधेयकले राखेको छ। यो ध्येय राख्ने कानुन प्रेस काउन्सिल भएका र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध भएका विश्वका कुनै पनि देशको सरकारले राखेको पाइँदैन।
नेपालको संविधान पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ। तर हाल आएको यो विधेयक यी सबै प्रावधानप्रति बेखबर देखिएको छ। यतिमात्र होइन आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा न्यूनतम पच्चीस हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने मनशाय यो प्रावधानको छ। यसको सोझो अर्थ हो, विधेयकले पत्रकारलाई मानसिक रूपमा त्रसित बनाउने र स्वनियन्त्रण ९सेल्फ सेन्सरसिप० को अवस्था सिर्जना गर्ने नियत राखेको छ। यो एक प्रकारको पत्रकारितामाथिको प्रतिबन्ध नै हो ।
फरक विचार वा आस्था राखेकै भरमा माघ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको विपरित गएर विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उसका राजनीतिक कार्यक्रमहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । सयौँ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । भने बुधबार भोजपुरमा प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेलाई गोली हानेर हत्या गरेको छ । यसरी ओली सरकारले शुरुमा राजनीतिक प्रतिबन्ध, त्यसपछि नेता तथा कार्यकर्तालाई गैरन्यायीक धरपकड तेस्रो चरणमा आउँदा गोली हानेर हत्या गर्न थालेको छ भने अर्को चरणमा हत्कडी लगाएर सामुहिक हत्या गर्ने निश्चित नै छ ।
अरु विभिन्न क्षेत्रमा नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप
त्यती मात्रै होईन । अरु ठाउँमा पनि सरकारले आफ्नो नियन्त्रण गर्न खोजको छ । पहिलो: मानवअधिकार आयोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको छ । सरकारको विरोध गर्न नसकोस् भनेर आयोगलाई प्रधानमन्त्री अधीनस्थको महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। दोस्रो : यसै गरी लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता खोसेर आफूखुसी कार्यकर्ता नियुक्तिको मार्गलाई सहज बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। तेस्रो : सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रयत्न गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भ निकालेर कांग्रेसलाई तर्साउन खोजेको छ ।
नेपालका मिडियाले सरकारले गरेका कर्तुत एकपछि अर्को गरि बाहिर ल्याउन थालेपछि मिडियासँग सरकार नराम्ररी झस्किएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, जनकपुरको राजस्तानी ड्रेसकाण्ड, वाईडबडी घोटला, होली वाईनकाण्ड, नेपाल टेलिकमको १२ अर्बको भ्रष्टाचारजस्ता सरकारका हर्कत बाहिर ल्याएपछि सरकारले प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । यसरी मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गराएर नेपालका सञ्चार माध्यमहरुलाई पार्टी तथा सरकारको प्रवक्ताको रुपमा राख्ने ।
सरकारको इण्टेस्टभन्दा बाहिरको समाचार प्रकाशित गरे एक करोडसम्मको जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ । जसरी विप्लव नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध, त्यसपछि नेता कार्यकर्ताको धरपकड र अहिले आएर गोली हानेर हत्या गर्दैछ त्यसैगरी पत्रकारहरुमाथि पनि अघोषित प्रतिबन्ध त्यसछि अर्को चरणमा पत्रकारहरुमाथि पक्राउको शृखला बढ्ने छ । जसले गर्दा नेपालको खोज पत्रकारिता पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध हुने छ । सरकारका सबै चरित्र हेर्दा फासिवादी बाटोमा गएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । फासिवाद देशकालागि फाईदाभन्दा पनि प्रत्युत्पादक नै हुने छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकलाई माफियाभन्दा चित्त दुख्छ : प्रधानमन्त्री ओली